Ireo no fampiharana ilaina amin'ny Android | Androidsis
Amin'ity lahatsoratra vaovao ity, ho toy ny fanangonana manokana, hasehoko anao Rindrambaiko ankafizin'i Francisco Ruiz, izany hoe ny tenako. Ny fanangonana izay azontsika atao lohateny hoe ny fampiharana ilaina amin'ny terminal Android-ko, rindranasa sasany izay raha vantany vao mandrehitra Rom vaovao hizaha toetra sy milaza amin'ny rehetra momba ny fomba fametrahana aho, ny zavatra voalohany ataoko dia ny mihazakazaka misintona azy ireo avy amin'ny Google Play Store ary hametraka azy ireo eo noho eo satria sarotra ny miaina tsy misy azy ireo.
Manaraka, ankoatry ny fampidirana sy ny fahazoan-dàlana ireo fampiharana ilaina izay entiko miaraka amiko foana Ao amin'ny terminal Android-ko, izaho koa dia hametaka rohy fampidinana mivantana amin'ny Play Store, raha sanatria ka misy amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny magazay fampiharana Android ny rindranasa, na ny rohy mankany amin'ny APK raha misy izany, misy izany dia fampiharana tsy misy amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny Google Play Store. Misy koa ireo rindranasa tian'i Francisco Ruiz.
1 Rindrambaiko ankafizin'i Francisco Ruiz
2 File Explorer io
3 Google Launcher ankehitriny
4 Fampiharana Google vitsivitsy ilaina ho ahy
5 Netease Music, tsara lavitra noho ny Spotify Premium
7 WhatsApp, Telegram, Messenger ary Skype
8 Facebook sy Twitter
9 Mpilalao mozika Pro
10 VLC ho an'ny Android
Rindrambaiko ankafizin'i Francisco Ruiz
File Explorer io
Ho ahy, nandritra ny fotoana ela dia tsy nisy fisalasalana izany ny Root File Explorer tsara indrindra Azontsika atao ny misintona ho an'ny Android amin'ny fahasamihafana be dia be amin'ny fampiharana hafa rehetra ao amin'ny fomba. Ka, ahoana no mety hitranga raha tsy izany, ity dia iray amin'ireo fampiharana ilaina amin'ny terminal Android-ko ary ilay iray izay hazakazako hametraka aloha.
Na dia tsy heverina ho akaiky azy aza izy io ho iray amin'ireo mpanafika tsara indrindra ho an'ny Android, indrindra noho ny fahaizany mampifanaraka sy mampifanaraka azy, ianareo rehetra izay nanaraka ireo horonan-tsary nampakariko tao amin'ny fantsona. AndroidsisVideo manolo-kevitra ny fampiharana na manazava ny tetika Android isan-karazany na koa ny fampianarana momba ny fanaovana zavatra amin'ny Android, afaka ho hitanao fa tsy misy isalasalana izany Launcher tiako indrindra amin'ny Android.
Ankoatra ny famolavolana sy ny tsiranoka tsy mandeha amin'ny laoniny, inona no mahatonga ahy hisafidy an'ity Launcher ity fa tsy iray hafa ny fampidirana goavana amin'ny serivisy Google rehetra, ary ny zava-dehibe indrindra amin'ny rehetra, miaraka amin'ny fampidirana amin'ny Google Now, ilay mahavariana sy tsy manam-paharoa feo mpanampy ho an'ny android an'i google izay iray amin'ireo fiasa tsy afaka tsy hita ao amin'ny terminal Android-ko.
Fampiharana Google vitsivitsy ilaina ho ahy
Ho an'ny Fampiharana Google tena ilaina amin'ny terminal Android-ko, Mitondra ity manaraka ity foana aho:
Ahoana no mety ho lava be sy mankaleo ny mampiditra rohy mivantana amin'ny fisintomana ny tsirairay amin'ireo rindranasa Google ireo, hitako fa mety apetaho amin'ny Google Play ny rohy mivantana toerana misy azy ireo rindrambaiko google rehetra.
Netease Music, tsara lavitra noho ny Spotify Premium
Ao amin'ny horonan-tsary mifatotra dia azonao jerena ny antony Mozika Netease Izy io dia iray amin'ireo fampiharana ilaina amin'ny Android ary satria heveriko fa noho ny antony maro safidy tsara kokoa ho an'ny Spotify Premium.
Shazam dia iray amin'ireo fampiharana ilaina amin'ny Android-ko. Fampiharana mampihetsi-po izay manampy antsika hahita ny lohateny sy ny mpanakanto an'io hira tena tianay io, henontsika hatraiza hatraiza ary tsy fantatsika hoe iza no mpanakanto mihira azy.
WhatsApp, Telegram, Messenger ary Skype
fotsiny fampiharana an-tsoratra eo no ho eo tsy mety tsy hita ao amin'ny terminal Android-ko izany.
Isaky ny mandrehitra Rom vaovao amin'ny terminal Android-ko aho, rindranasa roa izay tsy azo hadino avy ao amin'ny terminal-ko, na dia tsy mpankafy Facebook be aza aho, dia lazaina ny marina, ireto avy ireo Facebook sy Twitter, mihoatra ny zava-drehetra mba ho afaka mifandray maharitra amin'ireo tambajotra sosialy izay andraisanao anjara mavitrika Androidsis, mba hamaliana ny fanontanianao rehetra, ny fisalasalanao ary ny fanontanianao izay tonga aminay isan'andro amin'ny alàlan'ireto tambajotra sosialy roa avo lenta ireto.
Mpilalao mozika Pro
Na dia tsy tena nomena ny fangatahana fandoavam-bola aza aho, dia fampiharana tsy azo ihodivirana ity izay tsy azo banga amin'ny terminal Android ary efa tamin'ny androny no nandoaako tamim-pifaliana ny 3,50 euros ny vidiny satria amiko dia lava ny mpilalao mozika tsara indrindra ho an'ny Android miaraka amina safidy fanamafisana maro ary koa ny fanatsarana sy ny herin'ny feo.
VLC ho an'ny Android
fotsiny ny mpilalao horonantsary tsara indrindra ho an'ny Android, nohamarinina mba hahafahanao mamaky endrika video ary koa misy fihetsika amin'ny efijery Android handrosoanao haingana, haingam-pandeha haingana, hampiakarana ary hampidina ny famirapiratanana na ny feon'ny playback amin'ny swipe
fotsiny ny mpanjifa tsara indrindra amin'ny serivisy fitehirizana rahona izay manome antsika maimaim-poana tanteraka, tsy misy hafa ary tsy misy tsy inona fa tsy 50 Gb fitehirizana rahona maimaimpoana.
Farany ary hamita ity fanangonana manokana an'ny Rindrambaiko ankafizin'i Francisco Ruiz, amin'ny loza mety hitranga fa malahelo zava-dehibe iray aho, iray amin'ireo fampiharana ilaina ho an'ny Android -ko no isalasalana fa izany mpamaky vaovao izay mampiditra seamless media sosialy ary ny fahafaha-mamorona magazine anao manokana miaraka amin'izay zava-dehibe indrindra aminao sy izay mahaliana anao indrindra amin'ny vaovao ara-teknolojia, sosialy, politika, fanatanjahan-tena, sns.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ireto ny rindranasa ankafizin'i Francisco Ruiz: Fampiharana tena ilaina amin'ny Android-ko
Federico Lang dia hoy izy:
Francisco Manaiky 100% aminao aho, holazaiko aminao ny momba ny fampiharana «ampanaovy izahay»
1-Tsara ny kitendry Google, nihatsara be izy io, saingy aleoko SwiftKey ary manaitra ny fahaizany maminavina.
2-VLC amin'ny Windows ny tiako indrindra, amin'ny Android dia mety be ny manana fa mbola tsy ampy
Mampiavaka antsika izany, saingy misy rindranasa iray hafa nahasarika ny saiko ary io no toerana ekeko ary kely ihany no tokony hifanaraka amintsika, The Google Launcher. Ny antony mitovy amin'ny fahatsoranao sy fampidiranao. Nanome fihodinana aho tamin'ny fametrahana Xposed GEL Settings (azo alaina ao amin'ny Play Store), ahafahanao manamboatra ny Launcher ary manampy fiasa sasany toy ny fihetsika sy hanafina ireo sary masina ao anaty vatasarihana fampiharana. Manoro hevitra anao aho raha mbola tsy nanandrana izany.
Valiny tamin'i Federico Láng
Alexander Vasquez dia hoy izy:
Torohevitra fampiharana tena tsara dia hita fa manana ny tsirony mahafinaritra ianao 😉
Izaho manokana dia mampiasa WhatsApp, Skype ary VLC matetika, mila manazava aho fa tsy manana smartphone tsara aho satria raha tsy izany dia hampiasa fampiharana maro manana fanehoan-kevitra tsara ao amin'ny Google Play aho, fa amin'izao kosa mampiasa ireo fototra be indrindra.
Valiny tamin'i Alexander Vasquez
Ny tsara indrindra amin'ny Netease rehetra, raha mbola tsy nanandrana ianao dia aza mandany fotoana satria ho gaga ianao amin'ny zavatra rehetra azonao atao, na misintona maimaimpoana ny mozika tianao aza.
carlito brigante dia hoy izy:
Miombon-kevitra amin'ny hevitra teo aloha aho, efa ho 100% no manao izany rehefa mametraka ROM vaovao. Na izany aza, mampiasa Poweramp aho ho mpilalao mozika (heveriko fa tsara lavitra noho ilay nolazainao io, miaraka amin'ny hoditra koa, azo ampifanarahana amin'ny musixmatch ho an'ny tononkira).
Ankoatr'izay dia mampiasa feedly ho mpamaky Rss sy Pushbullet aho (Mba handefasana rohy, sary, horonan-tsary eo anelanelan'ny finday - pc - tablet. Ilaina). Hiezaka ny Netease aho. MISAOTRA
Mamaly an'i carlito brigante
JoseRoDL dia hoy izy:
Miarahaba anao Francisco! Te hanandrana ny Netease amin'ny Espaniôla aho fa ny fisie .apk nampiantranoina tamin'ny Mega dia tapaka. Raha afaka manamboatra azy ianao dia misaotra anao. Misaotra anao.
Valiny tamin'i JoseRoDL
Efa raikitra ny rohy ary amin'ity indray mitoraka ity dia mifandray amin'ny apk amin'ny teny espaniola.
Jovanny Delgado sary placeholder dia hoy izy:
Francisco, tsara ny rindranasao nefa manana olana aho rehefa te-hametraka azy rehetra na eo aza ny fitahirizam-bokatra manana 16 GB fitahirizana 1 GB fotsiny no tadidiko ary tsy mamela ahy hametraka rindranasa bebe kokoa izy ity, dia misy fomba hanitarana an'io memoara anatiny io?
Valiny tamin'i Jovanny Delgado
Fampiharana tena tsara sy asa tena tsara Don Francisco Ruiz, tiako ny milaza aminao fa nampiasa VLC aho mba hilalaovana horonantsary, saingy nisy horonan-tsary nahatsapa famoahana fifandraisana teo anelanelan'ny feo sy ny horonan-tsary, ka dia nivadika tamin'ny mpilalao MX aho, ireo horonantsary mitovy amin'ny VLC nilalao ahy tamina feo sy horonan-tsary narahina ratsy namboarin'ity rindrambaiko ity tamin'ny fomba lavorary.